Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wareysiyo » Guddiga Dalxiiska Afrika: Dalxiiska aan Caqabada Lahayn Hadda!
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wareysiyo • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guddoomiyaha ATB Ncube
Lixda waddan ee xubnaha ka ah Bulshada Bariga Afrika (EAC) ayaa bishii Oktoobar ee sanadkan ku qabtay Tanzania Carwadii Dalxiiska ee ugu horreysay (EARTE). Munaasabadan dalxiiska gobolka waxaa qaban qaabin doona dowladaha saaxiibka la ah si wareeg ah laga bilaabo sanadka soo socda.
Golaha EAC ee Dalxiiska iyo Wasiirada Duurjoogta ayaa taageeray bartamihii sanadkan, Bandhiga Dalxiiska Gobolka Bariga Afrika (EARTE).
Tansaaniya ayaa loo xushay inay martigeliso EARTE-kii ugu horreeyay oo ay dulucdiisu ahayd "Horumarinta Dalxiiska Adkeysiga u leh Horumarinta Dhaqaale-Bulsheed ee Loo Dhan Yahay." Bandhigga ayaa la xiray horaantii toddobaadkii hore.
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) waxaa matalayay Gudoomiyaha Fulinta Mr. Cuthbert Ncube oo ay weheliyaan wakiilo kale oo ka baxsan ururka EAC.
Mr. Ncube ayaa qabtay dood fulineed oo ku saabsan doorka ATB ee horumarinta dalxiiska Afrika.
eTN: Waa maxay aragtida koowaad ee Guddiga Dalxiiska Afrika ee ku wajahan dalxiiska Afrika?
NCUBE: Himiladayada koowaad waa in aan hubinno in Afrika ay noqoto "Hal Dalxiis” doorashada adduunka. Waxaan diiradda saarnay horumarinta, horumarinta, iyo suuq-geynta dalxiiska Afrika iyadoo loo marayo habab kala duwan.
Kuwaas waxaa ka mid ah ololaynta, abaabulida kheyraadka, iyo saameyn ku yeelashada siyaasadda si loo hubiyo in Afrika ay noqoto "Mid ka mid ah Dookhyada Adduunka."
Guddiga (ATB) ayaa hadda si wadajir ah ula shaqeynaya dowladaha Afrika dhinacyo kala duwan kuwaas oo aan isleenahay waxay soo dedejin karaan kobaca dalxiiska ee Afrika. Tan, oo ay ku jirto in meesha laga saaro caqabadaha u dhexeeya 54 dawladood oo Afrikaan ah si ay u soo jiitaan dalxiiska gudaha Afrika.
eTN: Sidee buu Guddiga Dalxiiska Afrika uga caawinayaa waddamada Afrika inay wax badan ka helaan dalxiiska?
NCUBE: Guddiga Dalxiiska Afrika waxaa ka go'an inuu ka caawiyo dowladaha, ganacsiga gaarka loo leeyahay, bulshooyinka, iyo daneeyayaasha kale horumarinta iyo fududeynta kobaca dalxiiska iyo horumarinta Afrika.
Waxaan si wadajir ah ula shaqeyneynaa Qaramada Midoobay (UN) iyo Midowga Afrika (AU) si aan u gaarno himilooyinka AU ee 2063 iyo 2030-ka Yoolalka Horumarin Waara ee Qaramada Midoobay (SDG) iyada oo loo marayo dalxiiska.
Tan waxaa ka mid ah summeynta, suuqgeyn, iyo kor u qaadida Afrika oo ah meel loo dalxiis tago oo ah goobta suuqa dalxiiska ee caalamiga ah.
Guddiga dalxiiska qaaradda (ATB) ayaa hadda u ololeynaya iyada oo loo marayo dawladaha Afrika, ururada ganacsiga, ururada aan dawliga ahayn, Midowga Afrika, iyo kooxaha Qaramada Midoobay iyo ururrada gobolka si loo xaqiijiyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee muwaadiniinta Afrikaanka ah ee gudaha Afrika dal ilaa waddan kale.
eTN: Waa kuwee dhaqdhaqaaqyada iyo qaybaha dadka ee ATB-du ay beegsanayso?
NCUBE: Ujeeddadu waa in Afrikaanku ay u safraan gudaha Afrika, iyagoo ka bilaabaya waddan ay deggan yihiin - dadku inay u safraan gudaha waddankooda dalxiisayaal gudaha ah, ka dibna dawladaha gobollada, iyo marka dambe Afrika oo dhan. Bulshada Bariga Afrika (EAC) ayaa u gogol xaadhaysa qaybta dalxiiska gobolka.
Waxaan arki karnaa Kenyan booqanaya Tanzania iyo xubnaha kale ee EAC, oo la mid ah Tansaaniya iyo inta kale. Dadka intiisa kale ee EAC waxay booqan karaan Galbeedka Tansaaniya, Uganda, iyo Rwanda si ay u arkaan chimpanzees, gorillas oo aan laga helin xubnaha kale ee kale.
Intaa waxaa dheer, ATB waxay u ololeyneysaa dhaqdhaqaaq fudud oo dhammaan dalxiisayaasha ajnabiga ah si ay u dalbadaan fiisada kaliya si ay uga gudbaan xuduudaha dhulalka Afrika. Tani waxay soo jiidan kartaa dalxiisayaal ajaanib ah oo badan si ay maalmo badan ugu qaataan Afrika iyaga oo si sahlan uga gudbaya xuduudaha iyagoo isticmaalaya hal fiisaha.
eTN: Marka laga reebo Koonfur Afrika iyo Waqooyiga Afrika ee Carabta, muxuu Guddigu qabanayaa si uu uga caawiyo Afrikada Saxaraha ka hooseeya inay wax badan ka helaan Dalxiiska?
NCUBE: Waxaan la kaashanay dhowr waddan oo Afrikaan ah si aan u abaabulno bandhigyo dalxiis oo lagu beegsanayo Dalxiiska Gudaha iyo Gobolka. Waxaan sanadkii hore (2020) ku yeelanay bandhig noocaan oo kale ah Tansaaniya – UWANDAE Expo.
Koox ka socota ATB oo ka kala socda Sierra Leone, Nigeria, South Africa, Botswana, Ghana, Ethiopia, iyo Masar ayaa kala qayb galay EARTE ee Arusha. Xayiraadaha safarka ee masiibada COVID-19 ayaa saamaysay shaqadeena, laakiin wali waan sii soconaa.
Guddiga Dalxiiska Afrika waxa ay hadda kala shaqaynayaan Shirka Maalgelinta Dalxiiska Caalamiga ah (ITIC) si ay u maal-gashadaan qaaradaha si kor loogu qaado horumarinta dalxiiska Afrika.
Iyadoo loo marayo ITIC, maalgashadayaasha ka socda Bulgaria oo kaashanaya maalgashadayaasha kale, waxay doonayaan inay dhisaan $72 milyan mashruuca huteelada 4 ee Waqooyiga Tansaaniya, gudaha Tarangire, Lake Manyara, Serengeti, iyo jardiinooyinka duurjoogta ee Ngorongoro.
Tansaaniya waa ka faa'iidaystaha ugu horreeya ee maalgashiga ITIC ee la wareegi doona Janaayo sanadka soo socda 2022.
Guddidu waxa kale oo ay la shaqaynaysaa dawladda Boqortooyada Eswatini, waxaanay dejiyeen istiraatijiyad horumarinaysa dhaqamadeena Afrika. Bandhig dhaqameedka iyo hidaha waa qayb ka mid ah Dalxiiska Gudaha iyo Dhaqanka ee soo jiida dad badan oo muwaadiniinta maxalliga ah horumarinta Dalxiiska Gudaha.
eTN: Sidee buu guddigani u caawinayaa sidii loo horumarin lahaa tan?
NCUBE: Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa sidoo kale siinaya meelaha yaryar iyo daneeyayaasha hab toos ah oo kharash-ool ah oo hufan si ay ula xiriiraan ganacsiga, warbaahinta, iyo dadka safarka ah ee ku sugan suuqyada dalxiiska ee Afrika. Ujeedadu waa in la gaaro awoodda dalxiiska maxalliga ah, iyo gudaha iyo gudaha gudaha dalxiiska ee Afrika si loo yareeyo ku tiirsanaanta dalxiisayaasha Yurub iyo Ameerika.
Faafida masiibada COVID-19 waxay baray cashar ah in Afrika ay ku tiirsanaato dalxiiska. Qufulka iyo xayiraadaha safarka ee lagu soo rogay Yurub, Mareykanka, Aasiya, iyo suuqyada kale ee dalxiiska ee suurtagalka ah ayaa si weyn u saameeyay dalxiiska Afrika
Afrika waxa ay heshaa 62 milyan oo dalxiisayaal ah in ka badan bilyan dalxiisayaal caalami ah oo la diiwaan geliyo sannad kasta. Yurub waxa ay heshaa ku dhawaad ​​600 milyan oo dalxiisayaal caalami ah.
Guddiga Dalxiiskayaga ayaa hadda riixaya kooxo dalxiis oo goboleed. Waa tallaabo sax ah oo loo qaaday ujeeddada ajendaha Afrika in loo arko EAC inay tahay koox-gacmaha isku-dhafka ah ee hab loo dhan yahay oo si wanaagsan la isku duway.
ATB waxa ay ku qaban doontaa bandhig Carweedka Qatar Travel Mart (QTM) kaas oo dhacaya bartamaha Noofambar. Waxaan ku casuunnay wasiirrada dalxiiska Afrika inay ka soo qaybgalaan, annagoo higsanayna inaan soo jiidano dalxiisayaal badan oo booqda Afrika iyo sidoo kale soo jiidashada horumarinta dalxiiska Afrika.
eTN: Sidee ayay Guddiga Dalxiiska Afrika u qiimeeyeen Bandhiggii Dalxiiska Gobolka Bari ee ugu horreeyay (EARTE)?
NCUBE: Dalxiiska gobolka EAC si xun ayaa loo saameeyay. Xoghaynta EAC waxay muujisay hoos u dhac dalxiis oo heer gobol ah oo ku dhow 67.7 boqolkiiba sannadkii hore (2020) ilaa 2.25 milyan dalxiisayaal caalami ah, oo luminaya US$4.8 bilyan dakhliga dalxiiska.
Gobolka EAC wuxuu horey u saadaaliyay inuu soo jiidan doono 14 milyan oo dalxiisayaal ah sanadka 2025 ka hor inta uusan dillaacin masiibada COVID-19 si xun u saameynin isbeddelka.
Gobolka EAC waxa uu leeyahay kaliya 8.6 boqolkiiba dakhliga dalxiiska Afrika iyo 0.3 boqolkiiba saamiyada dalxiiska adduunka.
Kenya iyo Tanzania ayaa tusaale wanaagsan u ah urur goboleedka soo socda halkaas oo dalxiisayaashu ay ka gudbi karaan xudduudaha dhulalka si ay u arkaan markaas oo ay ku raaxaystaan ​​kheyraadka dalxiiska ee la wadaago.
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa hadda si wadajir ah ula shaqeynaya dawladaha Afrika iyo hay'ado deeq-bixiyeyaal ah si kor loogu qaado xiriirka ka dhexeeya bulshooyinka maxalliga ah iyo ciyaartoyda dalxiiska.
Dalxiis ma jiro bulshada la’aanteed. Bulshooyinka waa safiirrada dalxiiska. Dalxiiskayaga dalxiiska ee Afrika asal ahaan wuxuu ku salaysan yahay gudaha bulshooyinka maxalliga ah.
eTN: Marka loo eego ATB, maxay ka dhigan tahay ka qayb qaadashada EARTE ugu horeysa?
NCUBE: Waa tallaabo sax ah oo loo qaaday ujeeddada ajendaha Afrika in loo arko EAC inay tahay urur-goboleedka gacmaha is-qabsada oo ka soo horjeeda kala qaybsanaan shakhsi ah oo aan meelna ina gaarsiin doonin qaarad ahaan.
Bal eeg, waxaan xusnay dadaalka ay waddo madaxweynaha Tanzania, Samia Suluhu Hassan, oo ah hormuudka iyo hormuudka istiraatiijiyadda horumarinta Afrika ee dhinaca dalxiiska. ATB waxay ku abaalmarisay Madaxweyne Samia Abaalmarinta Dalxiiska Qaaradaha 2021. Waxay u istaagtay si adag iyadoo waaxdu ay si adkeysi leh ugu soo laabatay masiibada Covid-19.
Madaxweynaha Zanzibar, Dr. Hussen Mwinyi, ayaa Tansaaniya ka daahfuray EARTE-ga sannadlaha ah si uu u noqdo wareegtada waddan kasta oo xubnaha ka ah. Bandhig-goboleedkan waxa uu Afrika ku tilmaami doonaa meel keliya oo la doortay, iyada oo diiradda la saarayo wax-soo-saarka qaaradaha. Waxaan u baahanahay inaan jebinno caqabadaha.
eTN: ATB ma u soo saartay wax tallaabooyin ah oo soo kabasho ah oo waaxda dalxiiska si ay cagaheeda isugu taagto?
NCUBE: Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa wada-shaqeyn la leh dalalka Afrika si ay ugu ololeeyaan soo kabashada dalxiiska ee Bariga Afrika iyo Afrika. Waxaan codsaneynaa shabakadeena suuqgeyneed ee gobolka iyo caalamka iyo warbaahinta si aan ugu dhiirigelino booqdayaal badan si ay u ballansadaan kadibna booqdaan Afrika.
ATB waxay ku fidinaysaa fursadaha suuqgeyn, xidhiidhka dadweynaha, maalgashiga, summaynta, horumarinta, iyo samaynta suuqyo dalxiis oo wanaagsan.
Iyadoo lala kaashanayo xubnaha gaarka ah iyo kuwa dawliga ah, Guddiga Dalxiiska Afrika waxay kor u qaadaan koboca joogtada ah, qiimaha, iyo tayada socdaalka iyo dalxiiska ee Afrika.